Warbixin:Yaa Mas'uul Ka Ah Ugaarsiga Lagu Hayo Culimaa'udiinka iyo Macalimiinta Dugsiyada Qur'aanka Magaalada Baydhabo.
Sunday March 20, 2016 - 13:19:16 in Wararka by Super Admin
Maleeshiyaad taabacsan maamulka Shariif Sakiin ee fadhigiisu yahay magaalada Baydhabo ayaa dad shacab ah ku dilay deegaan ku dhaw xarunta gobolka Bay.
Ciidamada Xabashida Itoobiya ayaa qabsaday magaalada Baydhabo sanaddii 2012
Wararka ka imaanaya deegaanka Carra Guduud ee duleedka Baydhabo ayaa sheegaya in maleeshiyaad taabacsan Xabashida Itoobiya ay dileen laba qof shacab ah.
Dadka ladilay mid kamida wuxuu ahaa macalin dugsi qur’aan, qaar katirsan ehellada dadka ladilay ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadku ay rasaas ku fureen gudaha deegaanka Carra guduud kadibna ay dhac iyo boob kula dhaqaaqeen gooba ganacsi.
Dadka sunnadu ka muuqato ee masaajidda iyo dugsiyada qur’aanka ku faafiya diinta islaamka ayaa bartilmaameed ka ah gudaha magaalada Baydhabo iyo deegaanada hoos yimaad.
Sedaxdii bilood ee lasoo dhaafay ayaa magaalada Baydhabo lagu dilay ugu yaraan 5 macalim oo caan ka ahaa gudaha magaalada dhammaantoodna waxay wax ka dhigayeen madaaris islaami ah halka qaarkood ay khudabo ka ahaayeen masaajidda.
Waxgaradka Bay iyo Bakool ayaa aamisan in ol olaha ka dhanka ah dadka ahlu diinka ay soo abaabuleen saraakiisha ciidanka Xabashida Itoobiya ee fadhigoodu yahay Baydhabo kuwaasi oo adeegsanaya maleeshiyaad calooshood u shaqeystayaal ah.